Cheap Double Hopper Quantitative Fatịlaịza Packaging Machine Suppliers na Factory | YiZheng
Gịnị bụ Ugboro abụọ Hopper quantitative Packaging Machine?
Na Ugboro abụọ Hopper quantitative Packaging Machine bụ akpaka erikpu mbukota igwe adabara ọka, agwa, fatịlaịza, chemical na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, nkwakọ ngwaahịa granular fatịlaịza, ọka, osikapa, ọka wit na granular osisi, ọgwụ, wdg Dị ka gị chọrọ, na gosiri nso nke ngwugwu arọ bụ 5kg ~ 80kg. Ngwunye ngwongwo na ngwugwu nkwakọ ngwaahịa bụ nke nwere akụkụ anọ: na-atụgharị akpaka, na-ebufe akụrụngwa, akụrụngwa akụrụngwa na njikwa kọmputa. Ọ nwere njirimara nke usoro ezi uche dị na ya, ọdịdị mara mma, arụ ọrụ siri ike, nchekwa ike na ịdị arọ ziri ezi. The isi engine adopts sọrọ-ugboro gburugburu propulsion, sọrọ-cylinder mmesho, elu dijitalụ ugboro akakabarede akara technology, sample nhazi technology na mgbochi nnyonye anya technology iji nweta akpaka njehie akwụ ụgwọ na mgbazi.
Ahaziri Design dị ka gị Specific chọrọ
Nhọrọ igwe ihe dị ka gị ina: Carbon ígwè, Full igwe anaghị agba nchara 304 / 316L, ma ọ bụ Raw ihe kọntaktị akụkụ bụ igwe anaghị agba nchara.
Akụkụ nke Igwe Nkwakọ ngwaahịa abụọ nke abụọ
1.Packaging nkọwa ndị kemeghi, ime ihe bụ nnọọ mfe n'okpuru na-arụ ọrụ ọnọdụ mgbanwe.
2.All akụkụ na kọntaktị na ihe na-mere nke 304 igwe anaghị agba nchara.
3.The ngụkọta ngwugwu arọ na ọnụ ọgụgụ nke akpa chịkọbara ngosi.
4.Emepụtara nri na nha nke ọma, na-etinye otu oge na ibudata. Ọ na-echekwa otu ụzọ n'ụzọ atọ nke oge ọrụ, ọsọ ọsọ na-ebu ọnụ, yana nkenke nkwakọ ngwaahịa dị elu.
5.Iji ihe mmetụta dị na mba dị iche iche, ndị na-eme ihe nkiri pneumatic dị, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ndozi dị mfe. Ihe nha ezi ihe bụ mgbakwunye ma ọ bụ wepu puku puku abụọ.
6.Wide ọnụọgụ ọnụọgụ, oke nkenke, yana igwe na-ebu igwe na-ebugharị nke nwere ike bulie ma wedata na tebụl, otu igwe bụ ọtụtụ ebumnuche na arụmọrụ dị elu.
Ugboro abụọ Hopper quantitative Packaging Machine Video Display
Ugboro abụọ Hopper Quantitative Packaging Machine Model Nhọrọ
Ibu Ibu (KG)
Microscopic Index Bara Uru (n'arọ)
Ọnọdụ na-arụ ọrụ
Welụ Naanị Otu
Ikwu iru mmiri
-10 ~ 40 Celsius
Modeldị pụrụ iche
.100 Ahaziri nhazi dị ka onye ọrụ mkpa
Kwuru Akpaaka Nkwakọ ngwaahịa
Igweoduakwa, akpaka agụta, infrared eri trimming, onu mwepụ igwe, ị nwere ike họrọ dị ka ndị ahịa chọrọ Organic Fatịlaịza Now Polishing Machine
Okwu Mmalite Gịnị bụ Automatic Dynamic Fatịlaịza batching Machine? Akpaaka Dynamic Fatịlaịza batching akụrụngwa na-bụ-eji maka ezi erikpu na dosing na nnukwu ihe na-aga n'ihu fatịlaịza mmepụta akara ịchịkwa ego nke ndepụta ma hụ na ezi usoro. ...
Arụrụ Aka Compost Turner